Buug Ayaan Ka Qori Karaa Xirfada Van Dijk, Hees Aan Leeyahay Ayaan Sadio Mane U Qaadi Doonaa-Erayadii Farxada Lahaa Ee Uu Jurgen Klopp Ku Amaanay Sadio Mane Iyo Van Dijk. - GOOL24.NET
Buug Ayaan Ka Qori Karaa Xirfada Van Dijk, Hees Aan Leeyahay Ayaan Sadio Mane U Qaadi Doonaa-Erayadii Farxada Lahaa Ee Uu Jurgen Klopp Ku Amaanay Sadio Mane Iyo Van Dijk.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa wacad ku maray in hees uu isagu iska leeyahay uu u qaadi doono Sadio Mane dhamaadka xili ciyaareedkan kadib markii uu xidiga reer Senegal halkiisa ka sii watay gool dhalintii cajiibka ahayd ee uu ku soo jiray.
Jurgen Klopp ayaa farxad wayn ka muujiyay qaabkii ay kooxdiisa Liverpool u soo karbaashtay kooxdii uu waqtiga dheer la soo xifiltami jiray ee Bayern Munich, wuxuuna si gaar ah u amaanay Van Dijk oo difaac ahaan iyo gool dhalin ahaanba door wayn ugu yeeshay kulankan.
Sadio Mane ayaa kulankii Bayern Munich iskeenay isaga oo 8 gool ku soo dhaliyay 9 kiisii kulan ee ugu danbeeyay laakiin waxa uu sii raacsaday laba gool oo kale sii uu Liverpool ugu soo saaro siddeed dhamaadka Champions league.
Markii Jurgen Klopp wax laga waydiiyay saamaynta Sadio Mane ee intii sanadkan 2019 lagu jiray waxa uu diiday in uu sharaxaad ka bixiyo wuxuuna yidhi: “Aad ayay iskaga cadahay taasi, mana doonayo in aan wax ku saabsan ka hadlo. Isagu wuu ogyahay, qof kastaaba wuu og yahay, xaqiiqdii ma doonayo in aan ka hadlo”.
Laakiin Jurgen Klopp ayaa balan ku qaaday in Sadio Mane uu dhamaadka xili ciyaareedka hees gaar ah u samayn doono wuxuuna yidhi: “Waxaa aad muhiim u ah in ay wiilashani taam yihiin. Kadib xili ciyaareedkan waxaad aniga i xusuusisaan in aan hees aan leeyahay ugu heesi doono Sadio mane haddii aad jeceshihiin. Xaqiiqdii waa ciyaartoy fiican, in badana ha sii waarto”.
Dhinaca kale Jurgen Klopp ayaa garan waayay erayo uu ku amaano Van Dijk wuxuuna yidhi: “Maxaan ka sheegi karaa? Buug ayaan ka qori karaa xirfadiisa, awoodiisa, inta badan ee aan isaga jeclahay, alla muxuu shaqsi fiican yahay”.
Jurgen Klopp oo ka sii hadlaya Van Dijk ayaa yidhi: “Aad ayuu u da’yar yahay, haddaba wuu qaan gaadhay, aad ayuu u xoogan yahay, wax walba wuu ku fiican yahay, laakiin Virgil waxa uu ogyahay in uu si ka fiican u ciyaari karo sidii uu caawa sameeyay, iyo in aanu u ciyari karno si fiican sidii aanu caawa u ciyaarnay”.
Klopp oo ka hadlaya qaybtii labaad ee kulankii Bayern Munich ayaa yidhi: “Laakiin qaybtii labaad, waxaanu u ciyaarnay si u fiicnayd sidii lagama maarmaanka ahayd ee suurtogalka ka ah kulan sidan oo kale ah. Waa muhiim in aad ciyaarta baaqi ku sii ahaataa, in aad haddaba degan tahay, in aad jawaab u hayso su’aalaha oo dhan iyo in aad wax badali karto, in aad farsamooyin kala duwan adeegsan karto, garabaha aad ka ciyaari karto iyo inta u dhexaysa”.